Umagazini Robinsicecream - Yesikhulumi Lapho Abesifazane Ungathola Ukwaziswa Kwamuva Kanye Amathiphu Fashion, Ubuhle, Ezempilo Kanye Nobudlelwane., July 2021
Izincazelo Zemfihlo Yokuzalwa Kamva Kwetshe Lakho
Wazi kahle ukuthi i-DOB yakho ikwenza uzwelane ngokwemvelo. Kepha unayo yini inkomba emfushane yokuthi itshe lakho lokuzalwa lisho ukuthini ngempela? Lapha, umlando osheshayo futhi ongcolile wayo yonke incazelo yelitshe lokuzalwa.
I-22 Genius Home Organisation Hacks Yokuzama
Sekuyisikhathi sokuhlelela intwasahlobo ethile — ngokuqala ngalezi zinhlangano ezingama-22 ezinhle kakhulu zasekhaya.
Ama-movie ehlobo angama-55 ahamba phambili esikhathi sonke nokuthi ungawabuka kuphi
Ngenkathi izinsuku ezifudumele nobusuku obufushane bungahlala izinyanga ezimbalwa ezedlulayo, ama-movie asehlobo angunaphakade (futhi angajatshulelwa unyaka wonke). Nalu uhlu lwethu lwama-movie amahle kakhulu ehlobo.
Ungazihlanza Kanjani Amateku Amhlophe: Umhlahlandlela Ophelele
Xhumana nomhlahlandlela wethu ophelele wokuthi ungawahlanza kanjani amateki amhlophe futhi ungazami ukuwabuyisela enkazimulweni yawo yangaphambili.
Izinto Ezi-6 Wena (Mhlawumbe) Ongazi 'Ngezikhathi ZikaKhisimusi 2'
Kusukela kubalingisi kuya kuma-animated elves, nazi izinto eziyisithupha (mhlawumbe) ongazazi nge-movie entsha yeNetflix, 'The Christmas Chronicles 2.'
Kusukela kubhontshisi wembewu ye-sunflower kuya ku-bhotela le-chickpea, nazi izishintshi eziyi-11 zamantongomane ezizama ukuzama uma ingane yakho ine-allergies yokungezwani komzimba.
Ama-sunscreen angama-14 ahamba phambili we-Zinc oxide Angeke ashiye i-White Cast
Awuqinisekile ukuthi uzoqala kuphi? Nazi izivikilanga zelanga ze-zinc oxide eziyi-14 esingenandaba nokuzigqoka.
AmaKhofi we-K-Cup ayi-12 ahamba phambili ozoqala ngawo ekuseni
I-Keurig ingenza ekuseni kube nomoya ophelele. Kepha akuwona wonke ama-pods ekhofi enziwe alinganayo. Lapha, amakhofi we-K-Cup ayi-12 amahle kakhulu ongawaphuza ekuseni omatasa, noma ngabe ukhetha ini.
Zonke 4 Zezingane zeNdlovukazi u-Elizabeth ezisuka Endala kunazo zonke kuya Kwezincane
Ubuwazi ukuthi iNdlovukazi u-Elizabeth ayinayo eyodwa, hhayi ezimbili, kodwa ezine izingane? Funda ukuze uthole uhlu oluphelele lwezingane zendlovukazi, kusukela kwabadala kuya kwabancane.
Imikhiqizo engama-24 ehamba phambili yezinwele ze-Frizzy (Noma Kuswakeme)
Sithole imikhiqizo engama-24 ehamba phambili yezinwele ezi-frizzy ukuze ukwazi ukujabulela isimo sezulu esifudumele ngaphandle kokukhathazeka ngomswakama.
Izinto eziyi-9 Wonke amaRedhead okufanele azi
Noma ngabe ubomvu obomvu wemvelo noma uthola izingidi zakho ezivuthayo ebhodleleni, lezi zeluleko zemfashini nobuhle kuhle ukuzigcina zisebenza.
Nakhu Ukugeza Isigqoko Ngendlela Efanele
Sihambe nesigqoko ngesandla (ngiyaxolisa, bekufanele sikwenze) kuPatric Richardson, inkulisa yokuhlanza nombhali we-audiobook Laundry Love, ukuthola ukuthi singawashwa kanjani isigqoko, nakhu obekufanele akusho.
I-12 ‘Minute to Win It’ Imidlalo yePhathi elandelayo Yengane Yakho
Ilungele amaphathi okuzalwa, imibuthano yomndeni noma noma nini lapho udinga ukukhipha izingane ezinweleni zakho, nayi imidlalo engu-12 emnandi oyidlalayo ngomzuzu owodwa nje.
Imininingwane nge-Engagement Ring kaClare Crawley evela ku-'The Bachelorette '(Kubandakanya Usayizi Nezindleko)
Ingakanani indandatho yokuzibandakanya uClare Crawley ayitholile ku-'The Bachelorette '? Futhi kubize malini? Nakhu konke odinga ukukwazi.
Amaqhinga Okudla Okuhle Keto Sifunde KuReddit
Ukudla kwe-ketogenic kungaba nzima ukunamathela ngaphandle kokukhohlisa imikhono yakho. Siphendukele kuReddit ukuthola izeluleko ezinhle kakhulu zokudla ngaphandle lapho.
UCamilla, uDuchess waseCornwall, Just Gave Followers a Rare Look at Her Personal Home Office (Nayo Yonke Imidwebo Yayo Yezinja)
UClarence House wabelane ngesithombe sikaCamilla, uDuchess waseCornwall, obesebenza ehhovisi lakhe eBirkhall ngejezi elibomvana. Bheka ihhovisi lakhe lapha.
Izinja eziyi-16 ezihamba phambili ezigoqa izingubo zokulala ezinemilenze
Izinja zezinqe azigcini ngokwanele ngokwanele ukulingana emathangeni, kepha ubuntu bazo kanye nezakhi zofuzo nazo zibenza bathambekele ekukhetheni ukuzithokozisa emathangeni cishe ngakho konke okunye. Lapha, izinja eziyi-16 ezinhle kakhulu ezake zaba khona.
Ukudla Oku-5 Okusebenzayo (kanye no-3 Okungasebenzi Nakanjani), Ngokusho Kwezazi Zokudla
Ama-Movie KaKhisimusi Angajwayelekile Angahlali Agugile
Ukuhlanza Umzimba Okuhamba Phambili Kwesikhumba Esomile Okungakushiyi Uzizwe U-Flapy Post-Rinse
UJohn Legend Uthole Iwayini Edakiwe & Wenza iResition Rendition ye ‘All of Me’
5 Amavidiyo kaJulianne Hough Dancing Azokwenza Ufuna Ukuvuka NeGroove
Ngabe uKaty Perry noTaylor Swift bangabangane futhi? Nabu Obunye Ubufakazi
Hlangana nabalingisi be-New Amazon Prime Original Show, ama-Bandish Bandits
Amasonto Ayisi-9 Amahle Emhlabeni Wonke Ungashada Empeleni
Konke Odinga Ukukwazi NgeChord Overstreet, aka Emma Watson's New Boyfriend
Ungayigeza Kanjani iCashmere ngesandla noma ngomshini (Ngoba Yebo, Ungakwenza Lokho)
Nakhu konke odinga ukukwazi mayelana nokugeza i-cashmere ekhaya, kungaba ngesandla noma ngomshini (ngoba yebo, ungakwenza lokho).
Wonke ama-movie we-Superhero (ne-Supervillain) eza ematiyetha eminyakeni emithathu elandelayo
Ukusuka kokuthi 'Izinyoni Zezisulu' kuya 'KuSuicide squad,' sihlanganise uhlu oluphelele lwazo zonke izincwadi ezinkulu zamahlaya ezithuthukiswa njengamanje. Thola okuningi lapha.
Amabha ayi-13 ahamba phambili we-LGBTQ + eLos Angeles
ISanta Monica Blvd ngokuqinisekile iyikhaya lamanye amabha we-LGBTQ + ahamba phambili e-LA, kodwa amanye kuphela. Kuneminye imiphakathi eminingi ye-LGBTQ +, omakhelwane nezindawo ongazihlola, enezinketho eziningi ze-imbibing. Lapha, imigoqo yezitabane ehamba phambili eLos Angeles.
Umhlahlandlela kaShanaya Kapoor Wemfashini Yelanga
Imibala kaShanaya Kapoor, ukulingana nesitayela sokufinyelela kumenza abe ugqozi olukhulu ngemfashini yasehlobo
Yonke imininingwane evela eRoyal Baby Archie's Christening Kule mpelasonto
Impela izinyanga ezimbili ngemuva kokuzalwa kwakhe, ingane yasebukhosini kaMeghan Markle nePrince Harry, u-Archie Harrison Mountbatten-Windsor, uqede enye ingqophamlando yomndeni wasebukhosini: ukubhapathizwa kwakhe.
Bukela iTrailer Yakuqala ‘Yezwe Lewayini,’ Kudlala u-Amy Poehler nawo wonke umuntu ongomunye Okuhlekisayo
I-trailer yokuqala ye-Amy Poehler's directorial debut, 'Wine Country,' ilapha futhi igcwele abantu besifazane abahlekisayo abafuna nje i-vino ethile.
Ama-Pantry Staples Okufanele Uhlale Unawo (nokuthi Ungapheka Kanjani Nawo)
Lolu hlu oluyinhloko lokudla okuyisisekelo kwama-pantry angama-27 luzoqinisekisa ukuthi uhlala unesiqalo sokudla ekhishini lakho. Nakhu okufanele uhlale unakho, nokuthi ungapheka kanjani ngakho.
Ukuhlanganiswa Kwemibala Okumangazayo Kokugqoka Ukuwa
Lapha, ama-combos ombala ayishumi nantathu ukuzama lokho okuzofaka impilo encane engutsheni yakho yasebusika.
30 Novemba Imibono Yesidlo Sakusihlwa Ezizolapha Ukukhathala Kwakho Ukupheka
Nayi imibono yangoNovemba 30 yedina engenangxabano njengoba imnandi (yep, kufaka phakathi i-Thanksgiving).
Izinsizakalo ezingama-22 zokulethwa kokudla ezingakusiza ngalesi sikhathi sokuhlukaniswa komphakathi
Ukugwema ukuphuma endlini njalo lapho sidinga ukushayelela i-fam isidlo sasemini, siqoqe izinsiza ezingama-22 ezinhle kakhulu zokulethwa kokudla, kusuka kumakhithi okudla kuya ekuthumeni ukukhiqiza ukuthunyelwa.
Izindlela Ezi-9 Zokusiza Izisulu Zomlilo Wasendle Njengamanje (Futhi Ukuya Phambili)
Amahektare, izilwane nempilo yabantu elahlekile ingazizwa ingenakunqotshwa — kepha kukhona izinto ongazenza ukusiza izisulu zomlilo wasendle ngokushesha futhi uye phambili.
Ama-Quotes ka-Princess Diana akhuthazayo angama-20 afakazela ukuthi Uyohlale EyiNkosazana Yabantu
Ifa likaPrincess Diana liphila futhi lezi zingcaphuno ezingama-20 ziwubufakazi impela. Funda ukuze ubone izingcaphuno ezinhle kakhulu zePrincess of Wales ezingasekho.
Ukupheka okulula kwe-13 kwe-No-Churn Fro-Yo ukuzama leli hlobo
I-Tangy ne-creamy, i-fro-yo eyenziwe ngokwabo iyindlela yokwelashwa yasehlobo. Inenhlanhla kuwe, futhi kulula ukwenza. Lapha, izindlela zokupheka eziyi-13 ezimnandi ezibandayo ozozithanda.
Lolu hlelo lwe-Murder Mystery Series Yilo Umbukiso Omuhle Kakhulu Ongawusakaza Njengamanje, Ngokusho Kwe-Entertainment Editor
Uma uthanda u-Olivia Colman (noma uthanda nje izimfihlakalo zokubulala), i-'Broadchurch 'iluchungechunge olungakuphutheli. Njengamanje ku-Netflix, isizini eyodwa ephela kuphela kufanele yanele ukukwenza ubuke.
Um, Ngokusobala isitayela se-Hairstyle sikaPrincess Diana Sasiyisinqumo Esisesikhathini
Umlobi kaPrincess Diana, uSam McKnight, uvula mayelana nokuthi iNkosazana yaseWales yathola kanjani ukusayina kwayo. Kuvela ukuthi bekungekho ukuhlelelwa okuhilelekile.
I-21 Shea Butter Usees Esibheja Ngayo Amafutha Kakhukhunathi Alandelayo
Noma ngabe ufuna ukuthuthukisa izinwele ezimfushane noma ugcwalise isikhumba esomile, ibhotela le-shea liyisithako sakho sokulwa nokulwa nalezo zinsizi eziwuhlupho. Lapha, i-21 shea butter isebenzisa izinwele, isikhumba nomzimba.
Udidekile Ngezinyathelo Zakho Zokuzivocavoca Isikhumba? Nayi i-oda elifanele
Izazi ezintathu zama-esthetic zichaza ukuthi ungazisebenzisa kanjani izinyathelo zendlela yakho yokunakekelwa kwesikhumba.
Izindlela Ezi-6 Zokugqoka Isiketi SikaJean
Khumbula emuva ngo-2004 lapho wonke umuntu enza iziketi ze-jean nama-Uggs nenhlanganisela yesitayela. Ngenhlanhla, ku-2018, kunezindlela eziningi zemfashini zokwenza isitayela kulokhu okuyisisekelo sasehlobo.
* Lokhu * Ingabe Ukunqunywa Kwezinwele Okuhle Kakhulu Kwehlobo
Uma ukhaphethi obomvu uyinkomba ethile, ukunqunywa kwezinwele kwale sizini ubude besilevu futhi kwenza izinto ezihlukahlukene kakhulu. Faka: ihlobo lob.
UKate Middleton Wenze Isimangalo Esimangazayo Ngemuva Kokubona INkosana uWilliam egqoke Uniform
UKate Middleton kuningi abengakusho ngoPrince William efake umfaniswano wakhe ngaphambi kokuba babophe ifindo likasofasilahlane, ngokusho komfundi wezindebe.
Uyini Umshini Wamanzi we-Hydrogen? Ukuzivocavoca kwe-Life-Changer noma i-Wellness Sham?
Ingabe izinzuzo zomshini wamanzi we-hydrogen zangempela noma enye imfashini yokuqina? Nakhu esikutholile.
Kungani I-Mbuzi Yobisi Lwezimbuzi Into (Futhi Ziyini Izinzuzo Zokuyisebenzisa?)
Ake sikhulume nge-lotion yobisi lwembuzi. Kungani sithandwa futhi yiziphi izinzuzo zesikhumba ukusisebenzisa?
I-Nanny Etiquette: Izinto Ezi-8 Okungafanele Uzenze
Uma ufuna ukuthobela imikhuba efanelekile yomzanyana, nazi izinto eziyisishiyagalombili azifunayo ngempela, ufuna ukuthi uyeke ukuzenza.
ama-movie amahle kakhulu ongawabuka nomndeni
uhlu lwamafilimu omlando we-2016
amakhambi asekhaya wokulawulwa kwezinwele
amakhambi asekhaya ezinwele awe